News - DTS Nestlé၏တူရကီစီမံကိန်းအားNestlé၏အပူချိန်ဖြန့်ဝေမှုစမ်းသပ်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်
ရေနွေးငွေ့ & Air ကို Retort
ရေမှုန်ရေမွှားပြီးတော့ Rotary Retort
ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့် Rotary Retort
ရေနွေးငွေ့ပြီးတော့ Rotary Retort
ဒေါင်လိုက် Crateless Retort စနစ်
အလိုအလျောက် Batch Retort စနစ်
စဉ်ဆက်မပြတ် Hydrostatic Sterilizer
Tray အခြေစိုက်စခန်း Retort
STERILIZATION တွင်အထူးပြု• High-end အပေါ်အာရုံစူးစိုက်
NTS ၏အပူချိန်ဖြန့်ဝေမှုစမ်းသပ်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်ပြီး DTS Nestlé Turkey စီမံကိန်းအားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
NTS ၏အပူချိန်ဖြန့်ဝေမှုစမ်းသပ်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်စွာ DTS Nestlé Turkey စီမံကိန်းအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့
Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co. , Ltd. သည်ပြည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာနှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်သွားစဉ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များ၏တညီတညွတ်တည်းအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
ဒီနှစ် DTS ကုမ္ပဏီသည်Nestlé Turkey OEM ကုမ္ပဏီ၏ကော်ဖီစီမံချက်ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးရေမှုတ်ဆေးပတ် ၀ န်းကျင်လည်ပတ်မှုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ကိရိယာများအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးပြီးအီတလီရှိ GEA ၏စက်ကိုပါလာသည်။ ဂျာမနီရှိ Krones ။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းမှ FAT အထိ၊ တစ်ခေါက်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအထိ; DTS အဖွဲ့သည်ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ တိကျခိုင်မာပြီးတိကျခိုင်မာသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအတွက်တင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များသည်“ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိ” သည်။ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသူအမေရိကန်ကိုNestléကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တောင်အမေရိကမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပုဂ္ဂိုလ်များကိုချီးမြှင့်သည်။ ဆယ်ရက်ကျော်ကြာပူးပေါင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, DTS ပိုးသတ်ဆေး၏တည်ငြိမ်သောနှင့်လှည့်အခြေအနေတွင်အပူဖြန့်ဖြူးအပြည့်အဝအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်Nestlé၏တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခြင်း
အပူစိစစ်အတည်ပြုကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်အပူစိစစ်အတည်ပြု high-end ဖောက်သည်များကအလွန်တန်ဖိုးထားသလဲ? DTS သည်ဤအလုပ်အတွက်မည်သည့်ကောင်းကျိုးများရရှိရန်လိုအပ်သနည်း။
ထုတ်ကုန်အပေါ်အပူကုသမှုလုပ်ဆောင်သောအခါအပူစိစစ်, ဆိုလိုသည်မှာ, ပိုးကင်းပစ္စည်းကိရိယာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏အပူချိန်သည်ပိုးမွှားများစဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ဖြစ်စဉ်အတွင်းတသမတ်တည်းဖြစ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ၊ ထို့နောက်ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုကိုရရှိနိုင်မည်လားဆိုတာစစ်ဆေးပါ။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်တိုရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ ဖြည့်ထားသောအဖျော်ယမကာများ၌အရည်အချင်းပြည့်ဝ။ ထိရောက်သောပိုးသတ်ခြင်းသည်သာအဖျော်ယမကာကိုယ်တွင်းရှိအင်ဇိုင်းများနှင့်အဏုဇီဝသက်ရှိများကိုဖျက်ဆီးသို့မဟုတ်သတ်ပစ်နိုင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများသည်စီးပွားဖြစ်ပိုးကင်းသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အပူစစ်ဆေးခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှုကိုသေချာစေသည့်အဓိကအချက်များဖြစ်ပြီးအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်သူများအတွက်ယူအက်စ်အက်ဖ်အက်စ်၏အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌အပူပိုးကင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုအပူစစ်ဆေးခြင်းအတွက်တူညီသောစံသတ်မှတ်ချက်မရှိသော်လည်းNestlé၏လိုအပ်ချက်များသည်အလွန်တင်းကြပ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော၊ စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသံစနစ်ရှိသောပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူများသာ၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ DTS သည်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်အခြေခံဖြစ်သည်။
DTS တွင်ကျွမ်းကျင်သော၊ ငယ်ရွယ်။ တက်ကြွသော R&D အဖွဲ့ပါ ၀ င်သည့်“ အဆင့်မြင့်၊ တိကျမှု၊ ထိပ်တန်းအဆင့်” ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများရှိပြီးစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေသည်၊ ပြောင်းလဲမှုတွင်ဆန်းသစ်သည်။ ငါယုံကြည်တယ် DTS ဝေးတဲ့နှင့်ဝေးတဲ့သွားနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးလိမ့်မယ်။
post အချိန်: ဇူလိုင် -30-2020
လိပ္စာ: dts စက်မှုဇုန်, zhucheng, Shandong ပြည်နယ်, pr တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ် +86 536-6549353